Ecociweyo 2 BDRM Self Check In-Prime East Memphis
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguAngela
Heyi nonke namkelekile eMemphis, kwiKhaya leBlues kunye neBBQ. Ifakwe kumbindi wesixeko, eli gumbi labucala libekwe kakuhle eli-2/1 igumbi lokuhlambela leendwendwe lilungele izibini, abahlobo, okanye umhambi weshishini. Le yeyona ndawo ifanelekileyo yokuzola, indawo ekhululekileyo yokuphumla ekupheleni kosuku olukhulu. Njengomhambi onamava we-AirBnb ngokwam, ndizamile ukubonelela ngayo yonke into ukwenza ukuhlala kwakho kube ngamava amnandi. Yonwabela ububele bokwenyani baseMzantsi!
Le ndawo ifana nendlu yakho encinci. Kukho amagumbi okulala ama-2, ngalinye linebhedi enkulu, iibhedi ezitofotofo kunye nokhetho lwemiqamelo ukukunceda ulale kakuhle.
Emhadini, ibhedi yecandelo ilungile ukukhaba emva, uphumle kwaye usasaze yonke imiboniso yeTV oyithandayo. Sibonisa ifriji encinci, imicrowave kunye nezinto ezisisiseko zokutya, ezilungele ukufudumeza okushiyekileyo kwiCapital Grill okanye iHog & Hominy. Sibonelela umenzi wekofu eKuerig ngokhetho lwekofu kunye neeti kunye nebhaskithi yesnack.
Igumbi lokuhlambela lineshawa yemvula ene-spray yesandla, kunye noxinzelelo olukhulu lwamanzi, kunye namanzi ashushu angenasiphelo. Kukho amampunge eyahlukileyo ukuba amanenekazi ukufumana zonke glammed up. Sinazo zonke izinto eziluncedo zokuhlambela, isomisi seenwele, kunye neetawuli ezininzi ezicocekileyo, ezimfumamfuma.
Bonke obunye ubutofotofo bekhaya bunikiwe;
-Iihanger, iigwegwe, iayini, ibhodi yokuayina
-I-Makeup mirror, isomisi seenwele, i-bath mat, iitawuli
-Isilingi, ifeni ephathwayo kunye nesifudumezi
-Isivula iwayini, iiglasi zewayini
-I-WIFI engenamkhawulo, iiTV ezi-2 nganye ineNetflix, iVidiyo eyiNkulumbuso
-Iingubo ezongezelelweyo kunye nemiqamelo
- Iimfama ezimnyama ezimnyama kunye neekhethini ezimnyama
-I-smoke kunye ne-carbon monoxide detectors kunye ne-fire extinguisher zibandakanyiwe.
Zonke izinto ozidingayo ukuze ube neglasi emnandi yewayini (isivuli sebhotile, iiglasi) ekupheleni kosuku kunye nekofu (iikomityi, amacephe, i-creamer, i-sweeteners, ikofu) ukuqala usuku lwakho.
QAPHELA UNGATSHAYI Ngaphakathi/ngaphandle. Le yipropati engenamsi nceda uhloniphe imithetho yepropathi yethu.
Eli khaya alixhotyiswanga ngokhuseleko olukhuselekileyo lwabantwana kwiintsana kunye nabantwana abaselula.
Le yindawo engenasilwanyana sasekhaya.
Esi sakhiwo simi kwisibane esisitshixo esisezantsi, izithuthi, indawo yeshishini ezaliswe zii-ofisi zoMthetho kunye nezoNyango, abacebisi ngezemali kunye neeSalon zeNwele. Kuthe cwaka emini nangakumbi emva kwentsimbi yesi-5pm.
Uya kuba nokufikelela kwi-24/7 kwisakhiwo
4.89 ·Izimvo eziyi-142
Le ndawo ikhethekileyo yindawo ye-oasis yasezidolophini yanamhlanje kumbindi we-East Memphis. Indawo esembindini, siyimizuzu eyi-15 ukusuka eGraceland kunye nesikhululo seenqwelomoya, imizuzu engama-20 ukusuka edolophini, imizuzu emi-5 ukusuka kwiiFama zaseShelby, imizuzu eli-10 ukusuka eGermantown. I-East Memphis inikezela ngamava amnandi okupheka asekhaya kunye neendawo zokudlela eziphezulu zasekhaya. Ifikeleleka kwi-Interstate 240 kunye ne-0.2 yeemayile ukuya kweyona Starbucks ikufutshane kunye neendawo zokutyela ezi-2 ezidumileyo zeBBQ kuphela imayile enye kulo naliphi na icala. Ithiyetha entle kakhulu yemiboniso bhanyabhanya nayo ngaphakathi kumgama oyimayile enye
Event Planner, lifelong Memphian and avid traveler. I love traveling to hear my favorite bands and experience local culinary flavors.
Ndazalelwa ndakhulela eMemphis, intombazana yokwenyani yasemaZantsi. Ndingathanda ukuphendula nayiphi na imibuzo onokuba nayo malunga nesixeko sam. Kule minyaka ingama-21 idlulileyo ndikhonze lo mmandla njengomtshato kunye nomcwangcisi womnyhadala. Ukuba ujonge ukusingatha umsitho nceda undazise. Ndiyakuthanda ukwabelana nabanye ngamava am kwaye ndineendlela ezintle zokuthumela kuwe.
Indawo yabucala ikwisakhiwo ekwabelwana ngaso neshishini lam locwangciso lomsitho. Ngokungena kwakho okungenasitshixo kunye nomnyango owahlukileyo wabucala kwindawo yethu- yiza kwaye uhambe njengoko uthanda, kunye nokufikelela kwi-24/7 kwisakhiwo. Ngena kumnyango wangaphambili kwindawo yokutyela/indibano eqhelekileyo. Ishishini lam lelokuqeshwa kuphela ngoko ke akusayi kubakho kungena kwaye ishishini linendawo yalo yabucala, njengokungangeneleli ekuhlaleni kwakho.
Kukho indawo yokupaka yabucala phambi kwesakhiwo. Ndiyabuhlonipha kakhulu ubumfihlo beendwendwe zam. Ukuba unesicelo esikhethekileyo okanye iimfuno, nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nam.
Ndazalelwa ndakhulela eMemphis, intombazana yokwenyani yasemaZantsi. Ndingathanda ukuphendula nayiphi na imibuzo onokuba nayo malunga nesixeko sam. Kule minyaka ingama-21 idluliley…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Memphis